किन तपाइकाे बच्चाकाे हातगाेडा दुख्छ ? यस्ता छन् कारण - ज्ञानविज्ञान
शरीरमा क्याल्सियम कमी हुँदा देखिन्छन् यस्ता लक्षणः
शरीरमा रहेको क्याल्सियममध्ये ९९ प्रतिशत क्याल्सियम दाँत र हड्डीमा हुन्छ। क्याल्सियम तह न्यून भएमा दाँत दुख्ने, किराले खाने हुन्छ। दाँत दुख्नुको अतिरिक्त दाँतको इनामेल हराउनु, दाँत वरपरका हड्डी कुहिनु र गिजासम्बन्धी अन्य रोग लाग्नु (पेरिडोन्टल डिजिज) क्याल्सियम अभावका लक्षण हुन्।
दाँत सिरिङ्ग हुने वा सबै बंगारा एकैपटक दुख्ने लगायतका समस्या पनि क्याल्सियमकै अभावले हुन सक्छ। यस्तो लक्षण देखिएमा क्याल्सियमयुक्त खानेकुरा प्रसस्त खानुपर्छ। त्यस्तै बालबालिकामा समयमै दाँत नपलाउने, पलाएका पनि निकै कमजोर हुने लक्षण देखिए क्याल्सियमको अभाव भनेर बुझ्न सकिन्छ।
हड्डी र मांशपेशीको पीडाले क्याल्सियम अभाव भएका मानिसलाई सामान्यतया कमजोर बनाउँछ र डर, त्रास, पीडा जस्ता मानसिक कमजोरी र मानसिक अस्वस्थता पनि क्याल्सिमयसँग सम्बन्धित छ। क्याल्सियमको अभावमा यस्ता समस्या आउन सक्छन्। अनुहार पहेँलो र थकित देखिनु तथा जतिखेर पनि अल्छी महसुस हुनुको कारण पनि क्याल्सियम अभाव हुन सक्छ।
बच्चा जन्मिएपछि महिलामा क्याल्सियमको अभाव हुने गर्छ, जसका कारण उनीहरुले कमजोर र थकित महसुस गर्छन्। क्याल्सिमयकै अभावमा सुत्केरी महिलाको दूध नआउने, एकाग्र भएर सोच्न नसक्ने र अत्यधिक थकित समसुस हुने गर्छन्। गर्भवती महिलालाई एक सय देखि एक सय २० एमजी क्याल्सियम दैनिक खुवाउनुपर्छ।स्थ्य खबर पत्रिकाको सहयोगमा
क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुराः
Don't Miss it सफल र खुसी जीवनका लागि ओशोको केहि जीवनउपयोगी भनाइ
Up Next सफलताका लागि अव्राहम लिंकनका महान भनाईहरु
३५ वर्ष कटेपछि महिला-पुरुषमा के हुन्छ जसले विवाहप्रति उदासिन बनाउँछ ? थाहा पाउनुहोस्
१. सिंगल व्यक्तिलाई आफ्नो करिअर अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । तर वैवाहिक जीवनको वन्धनमा बाँधिइसकेपछि घर परिवारलाई पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ…